८ % नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको आईसिएफसी फाइनान्सको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण : | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ८ % नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको आईसिएफसी फाइनान्सको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :
on: September 03, 2018 मुख्य खबर, लगानी
गत आव २०७४/७५ को चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले रू. ९ करोड ८४ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ४८ प्रतिशतले कमी हो । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. १९ करोड २६ लाख नाफा कमाएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी १७ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ३८ प्रतिशतले घटेकाले नाफामा कमी आएको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी १० प्रतिशतले बढेर रू. ८८ करोड २१ लाख पुगेको छ । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. २८ करोड ३१ लाख छुट्याएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ६ दशमलव ९० प्रतिशतले बढी हो । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको लगानी १ सय ७ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७५ करोड ६९ लाख पुगेको छ । यो लगानी अघिल्लो आवमा रू. ३६ करोड ५२ लाख थियो । साथै, कम्पनीले २०७४/७५ को मुनाफाबाट आफ्नो चुक्ताको ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको साउन ११ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १६३
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ४७३
५२ हप्ताको न्युन व्यापार मूल्यः रू. १५४
१८० दिनको औषत व्यापार मूल्यः रू. १८५.१९
अध्यक्षः सुरेश कुमार अग्रवाल
प्रमुख कार्याकारी अधिकृतः राम बाबु पन्त
प्रधान कार्यालयः भाटभटेनी, काठमाडौं
वेबसाइट : www.icfcbank.com
स्टक स्टिकरः आइसिएफसी
कम्पनीको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
असार मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ८ अर्ब ८७ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. ६ अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप १० प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति ४८ प्रतिशतले बढेर रू.२५ करोड ४६ लाख र अन्य सम्पत्ति रू. १५ करोड ८३ लाख रहेको छ । खुद ब्याज आम्दानी रू. २७ करोड ५ लाख, कर्मचारी खर्च रू. ८ करोड ८३ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ८ करोड ४७ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ११ करोड ३१ लाख पुगेको छ ।
असार मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ३ करोड ४६ लाख खराब कर्जा उठाउन कम्पनी व्यबस्थापन सफल भएको छ । निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको छ । सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ४ करोड ३९ लाख छुट्याएको छ ।
कम्पनीको पूँजीकोष लागत १० दशमलव ८४ प्रतिशत र पूँजी कोष पर्याप्पतता ३७ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुको साथै नयाँ नयाँ व्यवसायिक योजनाको विकास, लगानीका क्षेत्रहरुको खोजी, व्यवसायिक सञ्जाल वृद्धि तथा व्यवसायिक विकासका लागि शाखा विस्तार गर्दै लाने योजना रहेको छ ।
कम्पनीको चौंथो त्रैमासीक वित्तीय विवरण अनुसार प्रति शेयर आम्दनी अनुपात रू. ११ दशमलव १६, मूल्य आम्दानी अनुपात १५ दशमलव ४१ र तरलता अनुपात ३० दशमलव १७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ३२ दशमलव ०९ रहेको छ । सोमवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ६३ छ ।
अर्निङ पावर रेशियोः
खरीद चापः कम्पनीको सोमवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्रि चापको तुलनामा खरीद चाप साढे ५८ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म २ हजार ९ सय ३३ कित्ता शेयर खरीद र ५० कित्ता शेयर विक्रि गर्ने माग थियो ।
४ जुन २०१८ ३ सेप्टेम्बर २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीको ६१ दिनको कारोबारको अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ६१ दिनको कारोवारमा आरएसआइ न्यूट्रल जोन (५१ दशमलव २५ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ६१ दिनको कारोवारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन २ दशमलव ९ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम प्राप्त हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ६१ दिनको कारोवारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत एक आपसमा नजिकिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । हालको मूल्य रू. १ सय ६३ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महङ्गिएमा रू. १ सय ७० मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा रू. १ सय ५५ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।